सबैकाे भाग्य बदल्ने, १ वर्ष देखि गायब भएका युटुबर भाग्य न्यौपाने कहाँ छन ? - Onlines Time
सबैकाे भाग्य बदल्ने, १ वर्ष देखि गायब भएका युटुबर भाग्य न्यौपाने कहाँ छन ?
July 30, 2021 onlinestimeLeaveaComment on सबैकाे भाग्य बदल्ने, १ वर्ष देखि गायब भएका युटुबर भाग्य न्यौपाने कहाँ छन ?
अग्लो कद झ्याम दारी पातलो शरीर अनि हल्का कालो बर्णका प्रियपात्र ।पुर्बेली लबजमा क्यामेरामा बोलेर लाखौको मनमा बसेका सयौलाई सहयोग गरेका व्यक्ति हुन् युटुबर भाग्य न्यौपाने ।
पत्रकारितामा कुनै अध्यन नगरेका भाग्य न्यौपानेलाइ योक्षेत्रमा लागि रहन त्यहि भिडियो कोशे ढुंगा साबित भयो । युट्युबमा अन्तर्वार्ता लिएर उनि सेलिब्रेटी नै बनेका छन ।निरन्तर कर्म गर्दै गएका भाग्य न्यौपानेको भाग्य भने युट्युबले नै चम्काइदियो। गाउँगाउँ पुगेर लिएका उनका अन्तर्वार्तालाई लाखौँ दर्शकले युट्युबमा हेर्ने गरेका छन् ।
कोइ बि’रामी परे होस् चाहे कोइ खान नपाए होस् उनि सहयोग लिएर पुग्थे ।कतै नया प्रतिभा भेटीए क्यामेरा लिएर पुगी हाल्थे ।तर केहि महिना यता भाग्य कहिँ कतै देखिएका छैनन् ।
उनले आफ्नो सामाजिक संजाल्हरुमा कुनै पोस्ट गरेका छैन् । युटुब च्मायानलमा निरन्तर भिडियो पोस्ट गर्दै आएका भाग्य न्यौपानेले आफुले चलाउदै आएका ततातो खबर , भाग्य न्यौपाने युटुब च्यानलमा कुनै भिडियो पोस्ट गरेका छैनन् ।
July 11, 2021 onlinestime
१४ वर्षको बालकमा अ*च्चमको शक्ति, आँखा बन्द गर्न बितिकै कसरि पुग्छन अर्को ठाउँ ? , भिडियो हेर्नुहोस् (जानकारीका लागि सेयर गराै)
June 4, 2021 onlinestime